I-Perfect Country B&B Retreat engu-2 - I-Airbnb
I-Perfect Country B&B Retreat engu-2
Benschop, Utrecht, i-Netherlands
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Annette
I-Bed & Breakfast La Vita Nova iyindawo yokuhlala esesitayeleni ehlanganiswe nentshisekelo yokwamukela izivakashi. Uzothola imvelo, isiko nokungenisa izihambi konke endaweni eyodwa!
Silwela ukwenza izivakashi zethu zijabule kungakhathaliseki ukuthi uhlala nathi ubusuku, impelasonto, noma iholide elandisiwe.
Silangazelela ukukuthola njengesivakashi sethu!
I-Bed & Breakfast La Vita Nova
Silwela ukwenza izivakashi zethu zijabule kungakhathaliseki ukuthi uhlala nathi ubusuku, impelasonto, noma iholide elandisiwe. Sikubeka kuqala, futhi sikuvumela ukuthi uzijabulise phakathi nokuhlala kwakho.
Ongakulindela Ngesikhathi Sokuhlala Kwakho
Leli kamelo elithandekayo lingathatha abantu ababili. Noma kunjalo, uma unabantu abangu-3, noma abangu-4, kunekamelo elengeziwe.
Ikamelo eliyinhloko lithokomele futhi lihle ngazo zonke izinto ezincane ezikwenza uzizwe wamukelekile. Umbhede unethezeke kakhulu ngezingubo ezinhle zokulala nama-quilts. Kuzoba nezimbali ezintsha egumbini lapho ufika.
Ikamelo elengeziwe linikezwa ngenani eliphansi elingu-30 Euro umuntu ngamunye, njengoba lihloselwe kuphela ikamelo 'elengeziwe' uma indawo idingeka. Leli ikamelo elihloniphekile endaweni ethokomele enamafasitela ahlelwe kahle.
Indlu yokugezela intsha futhi ingeyesimanjemanje. Kunosinki ababili, ishawa, amathawula ahlanzekile nsuku zonke, nendlu yangasese ehlukile.
Kukhona ithelevishini, i-inthanethi engenantambo yamahhala, indawo yokungena eyenzelwe izivakashi kuphela, kanye nendawo ephephile uma kudingeka. Akukho ukubhema.
Imihlangano yebhizinisi namasiko/izingqungquthela
Eceleni kwemisebenzi yethu ye-B&B ngezikhathi ezithile sibungaza imihlangano nezingqungquthela endaweni enokuthula. Umoya wasemaphandleni nobumfihlo buqinisekisa umcimbi ophumelelayo.
ye-B&B yethu isesakhiweni esihlukile epulazini elidala kusukela ngawo-1600. Ngaphandle kunezingadi ezinhle, nendawo enkulu yokuhlala elangeni, noma ujabulele ukudla.
Emasimini angomakhelwane kunamakhekhe namadlelo asendle. I-B&B yethu iseduze nedolobha lasemaphandleni elibizwa ngokuthi yi-Benschop, okuyisibonelo samagugu esiko lase-Dutch.
Sithemba ukuthi uzovakasha maduzane ukujabulela le ndawo enokuzola nebukekayo. Lena indawo enhle enezindawo zokuhlala ezinhle, indawo enhle, ukudla okumnandi kwasendaweni umkhiqizo, nababungazi abanobungane! Ngamafuphi, indawo ekahle kakhulu yokuhlala.
Uma unemibuzo, sicela ubuze. Silangazelela ukuzwa kuwe.
ubusuku obungu-7 e- Benschop
Goede bedden, rust en een fijne sfeer, allemaal elementen die de gast aanspreken.
In Bed & Breakfast La Vita Nova is dit alles gecombineerd met een vleugje passie. We maken het gasten graag naar hun zin…
Hlola ezinye izinketho ezise- Benschop namaphethelo